Vhura Tsime Rezinesi Kuenzanisa [Nhungamiro]
shoma: Iri gwara rakadzama rinokupa kuenzanisira Open Source marezinesi kuenzanisa. Nemarezinesi eOpen Source akatsanangurwa pano, inofanira kukubatsira iwe kusarudza rakakodzera Open Source rezinesi reprojekti yako.
Nekudaro, iwe urikushanda pane iyo inotonhorera purojekiti nyowani kwekanguva - uye wagadzirira izvozvi kuti utore danho kubva yakavharwa to open source.
Izvo zvinoita sekunge rakanyanya basa kupfuura kuchenesa masosi uye nhoroondo yekuzvipira usati wasundira chako repamhepo kupinda GitHub or Bitbucket…… Kusvikira mubvunzo weRisense wabuda. Pane sarudzo dzakawanda dziripo. Ndeipi yekusarudza? Uye iwe kwazvo unoda Rezinesi here mushure mezvose?
Mhinduro pfupi kumubvunzo wekupedzisira uyu uri nyore: Ehe, iwe kwazvo unoda rezinesi. Nezve izvo License zvaunoda, ini ndinogona kutoita mhinduro ipfupi: zvinoe-.
Asi kana iwe uri wakakomba nezve yako projekiti, iwe ungangodaro unoda zvishoma zvishoma zvimwe zvakawanda. Saka verenga kumberi - uye rangarira: uri kupinda munzvimbo tsvene yehondo izvozvi!
Ini ndinoda Rezinesi? Uye chii chiri rezinesi mushure mezvose?
Rezinesi iri pamutemo mvumo yakapihwa nemuridzi weRimwe Basa (iye “Anopa Risense”) kune vamwe vanhu (iye “Rezinesi”) uye kutonga mabvumiro aanotenderwa kushandisa iro Rezenisi.
Izvi zvinotora fomu yechibvumirano, mapato ese anofanirwa kubvumirana nawo. Mazuva ano, kugamuchirwa kuri panzvimbo yekurehwa: chete na kushandisa rimwe Basa, unonzi unobvumirana neRisense yekushandisa.
Kungoita kuti kufunga kuve pachena, kana uchisunungura yako pachake kushanda, iye Licensor ndiye iwe. Uye iye rezinesi, munhu uchishandisa kodhi yako. Zvakare kutaura, izvi zvinosanganisira zviviri zvikuru zvikamu: Developers uye vashandisi vekupedzisira.
Uye kugadzirisa mashoma mashoma mazwi echiremera, na kugadzirisa Basa rako, rezinesi riri kugadzira izvo zvinonzi Basa Rinobva. Haasi marezinesi ese anobvumirana hazvo kana iyo shandisa Yebasa rako mune rakakura basa inokodzera iyo yekupedzisira seDerivative Basa kana kwete. Sezvauchaona pazasi, mamwe marezinesi anonyatso kugadzirisa izvo zvinhu.
Chii chiri chinangwa cheRisense?
Chaizvoizvo, iyo Rezinesi inzira yekuti Licensor uye iye Rezinesi vabvumirane pane iyo kodzero uye zvisungo of zvose zviri zviviri wavo. Kodzero idzodzo nezvisungo zvine chekuita neRisense zvinogona kuva chero chinhu - kusvika padanho rezvinobvumidzwa neMutemo. Semuenzaniso, Licensor angangoda kuti iye rezinesi atore zita rake kana achishandisa basa rake. Kana anogona kupa mvumo yekuteedzera basa rake, asi kwete kuchinjisa neimwe nzira. Kana kunyangwe kuda kuti Rinoburitsa Basa kuti riburitswe pasi pemitemo yakafanana neiyo yekutanga Basa.
Kune rimwe divi, iro rezinesi inzira yekuchengetedza iye rezinesi futi. Nekutaura zvakajeka kuti angashandise sei Basa rako, haasi panjodzi yekukuona iwe usingatarisiri uchikumbira mvumo kana imwe nzira yekuripwa nekushandisa basa rako. Chinhu chakakoshesa kubvumidzwa kwebasa rako.
Saka, rezinesi richadzivirira basa rako. Ndichadzivirira Licensor. Asi zvinokudzivirira zvakare. Ndinoreva iwe, pachako. Semuenzaniso nekudzikamisa iro basa reLisense kuitira zvinokuvadza zvinokonzerwa nebasa rake.
Uye ko kana ndikasashandisa chero rezinesi zvachose?
Mukushaikwa kweRisense zvakabatana zvakajeka neBasa, "default" copyright yehutongi mvumo inoshanda. Mune mamwe mazwi, haana funga "kusavapo kwerezinesi" sechipo chakazara kuti isu tiite chero zvatinoda nebasa rako. Uku ndiko kupokana chaiko: pasina chero rezinesi chairo, iwe, munyori, hauna kuregerera KUNE kodzero dzako dzakapihwa nemutemo.
Asi gara uchiyeuka rezinesi rinotonga kodzero uye zvisungo. Wakambozvibvunza here kuti nei akawanda License chinyorwa chine chirevo chakanyorwa mune ZVESE UPPERCASE LETTER nezve vimbiso yakapihwa nechigadzirwa - kana kazhinji kusavapo kwevimbiso? Izvi ndezvekuti chengetedza muridzi webasa achipokana nezvakavimbiswa zvisizvo kana fungidziro yemushandisi. Chinhu chekupedzisira chaunoda kumhan'arirwa semhedzisiro yekuburitsa rako rakavhurika-sosi!
Ndinogona here kushandisa rezinesi retsika?
Hongu unokwanisa. Asi pamwe haufanire.
Kuva chibvumirano, rezinesi haigone (mumatunhu mazhinji? Ese zvavo?) Kutora pamberi pemitemo yenyika. Nekudaro kunetsekana kwekumanikidza kodzero dzerezinesi munyika yepasi rose. Zvinogona kunge zviri nyore (ndinoreva, zvishoma kuomarara) kudzivirira rezinesi "rakajairika" pamberi pemutongi. Muchokwadi, nyaya dzakadai dzakatodzivirirwa mumatunhu akati wandei uye dzinogona kutaurwa sedzakatangira. Zviripachena, chimwe chinhu chisingagone kuitwa neCustom License.
Mukuwedzera, maRisense etsika (dzimwe nguva anodanwa nemazita Rezinesi Rekusavimbika) inogona kugadzira kusapindirana nemamwe marezinesi, zvichikonzera kuenderana kwakashata kweBasa rako kutaura zviri pamutemo.
Ndingashandisa marezinesi akati wandei?
Hongu. Multi-rezinesi - kunyanya Dhi-rezinesi - hazvisi izvo zvisingawanzoitika. Izvi zvinonyanya kuitika kana iwe uchida kuvaka bhizinesi kutenderedza yako Yemahara Basa. Muchiitiko ichocho, yako projekiti inogona kusunungurwa zvese pasi peimwe rezenisi reFOSS uye rezinesi rekutengesa.
Kumwe kushandiswa kweanopa marezinesi mazhinji kuwedzera kuenderana, nekutendera kuti Basa rako ribatanidzwe nemabasa akaburitswa pasi pematemu akasiyana kana kugutsa zvakasiyana zvinodiwa nevashandisi kana zvinodiwa Ichi ndicho chikonzero nei chimwe chirongwa chakaburitswa pasi pemarezenisi mazhinji eFOSS.
Asi yambiro: haasi marezinesi ese anowirirana pamwe chete! Zvekare zvakare, ndinokuodza moyo kuti usadzorezve vhiri nekugara neanozivikanwa marezinesi anoenderana kana iwe uchida kuenda nenzira iyoyo.
Ndinogona here kuchinja rezinesi "gare gare"?
Hongu. Muridzi wekopi ndiye ane chekuita nemvumo yekupa marezinesi. Zvirinyore kushandura rezinesi chero bedzi uriwe wega unopa. Asi kutora muenzaniso wakanyanyisa, kana Linus Torvald angade kuburitsa Linux Kernel pasi peimwe rezinesi, angangoda kutanga chibvumirano chezviuru zvevabatsiri kuchirongwa ichocho. Chinhu chisingaite mukuita.
Kune chirongwa chakakura zvine mutsindo, zvinogona kuitwa. Uye zvirizvo, zvaive sezvauchaona mune mimwe mienzaniso pazasi.
Ndeipi Open Open Rezinesi yandinofanira kushandisa?
Ok, ikozvino, wagutsikana kuti unofanirwa kushandisa Standard License. Asi Ndeupi wekusarudza? Sarudzo yekupedzisira iri kwauri. Uye kune vakagadzirwa zvakanaka chaizvo vanowanikwa pawebhu kuti vakubatsire mune yako sarudzo. Kungo taura zvandinoda:
Asi semazuva ese nenyaya dzemutemo, mhinduro chaiyo ichave yekuverenga - uye kunzwisisa - chiremera chirevo cheRisense. Izvo zvinogona kuda rubatsiro rwegweta nyanzvi. Chinhu chandisiri.
Asi izvo zvandinogona kuita kukupa imwe sumo kune akajairika marezinesi kuitira kuti utungamire ako ekutanga matanho.
GNU General Ruzhinji Rezinesi (GPL)
GPL ndeimwe yeanonyanya kufarirwa Open Source License. Inouya mushanduro dzinoverengeka - asi purojekiti nyowani, unofanirwa kufunga nezvechangobva kuitika, inova iyo LPG 3 panguva yekunyora uku.
Kutsigira yakasimba rezvideo, iyo GPL ndiyo inogona kunge iri inodzivirira yemahara software rezinesi. Chimwe chinhu chinogona kurumbidzwa kana kushoropodzwa nekuda kwekuona maonero ako. Pfungwa yepamoyo kuseri kweGPL kuve ani Rinobva basa rinofanira kusunungurwa pasi peGPL futi.
Basa racho rakakodzera kushandiswa kwekutengesa.
Marezinesi anogona kugadzirisa basa.
Marezinesi anofanirwa kuburitsa sosi pamwe chete neDerivative Work.
Rinobva basa rinofanira kusunungurwa pasi pemitemo imwechete.
Iyo GPL ndiyo chaiyo rezinesi rezvirongwa zveFree Software Foundation. Kusanganisira iyo Zvishandiso zveGNU pamwoyo we chero Linux system. Makuru mapurojekiti - a fortiori vekutengesa - vanowanzo shandisa GPL pamwe chete neimwe kana akati wandei mamwe maLayisensi.
Inkscape (Vector kudhirowa): GPLv2
Drupal (Webhu Zvemukati Management Sisitimu): GPLv2
MariaDB (Dhatabhesi): GPL v2
MySQL (Dhatabhesi): GPL uye Rezinesi Yezvekutengesa
Qt (cross-platform application framework): LGPL, GPL, uye Zvekutengesa - zvinoenderana nema module uye sevhisi-chibvumirano chikamu
GNU Chishoma General Ruzhinji Rezinesi (LGPL)
Iyo GPL inodzvinyirira zvakanyanya mupfungwa iyo inomanikidza chero Basa Rinoburitswa kuti riburitswe rakavhurika-sosi pasi pemazwi akafanana. Izvi zvinonyanya kunetsa kumaraibhurari - ayo ari kuvaka mabhuroko eesoftware yakakura: nekuburitsa raibhurari pasi peGPL, unomanikidza chero application kushandisa raibhurari iyoyo kuti iburitswe seGPL futi. Chinhu chinonzi LGPL kero.
Kune maraibhurari, iyo FSF inosiyanisa nyaya nhatu:
Raibhurari yako inoshandisa chiyero chinokwikwidza neisina-yemahara muyero. Panguva iyoyo, kutorwa kwakawanda kweraibhurari yako kunobatsira Mahara Software kukonzera. Iyo FSF inoratidza iyo chaiyo inobvumidza Apache License yenyaya iyoyo (yakatsanangurwa mumashure mune icho chinyorwa).
Raibhurari yako inoshandisa chiyero chatove kuitwa nemamwe maraibhurari. Muchiitiko ichocho, hapana bhenefiti yeFree Software chikonzero chekusiya copyleft zvachose. Saka FSF inokurudzira LGPL.
Chekupedzisira, kana raibhurari yako ichiita kwete kukwikwidzana nemamwe maraibhurari kana mamwe maitiro, iyo FSF inokurudzira GPL.
Iyo nharo dzeFSF kazhinji zvine hunhu uye huzivi. Mukuita, vagadziri vanogona kunge vaine zvimwe zvinonetsa. Kunyanya kana vachironga kugadzira bhizinesi zvichienderana nebasa rakapihwa marezenisi. Kamwe zvakare, mbiri-rezinesi inogona kunge iri sarudzo yekufunga.
Copyleft isina kusimba (yakasungwa kune raibhurari ine simba)
kana iwe shandura iro Basa, iwe fanira kusunungura iro Rakagadziridzwa Basa pasi pematemu akafanana.
kana iwe shandisa iro Basa, haufanire_kusunungura iro Rinoburitsa Basa pasi pematemu mamwe chete.
OpenOffice.org 3 (hofisi suite): LGPLv3 - asi Apache OpenOffice 4 yakachinjira kuApache License 2.0.
GTK +, iyo GIMP Toolkit (GUI chishandiso): LGPLv2.1
CUPS (cross-platform kudhinda system): GPL kana LGPLv2 kunze kweApple anoshanda masisitimu - zvinoenderana nezvinhu.
WineHQ (Windows inoenderana dhata): LGPLv2.1
GNU Aspell (Spell yekutarisa): LGPLv2.1
Eclipse Veruzhinji Rezinesi (EPL 1.0)
Iine kopyleft isina kusimba pane iyo LGPL, iyo Eclipse License iri nani Bhizinesi-Rakajeka sezvo ichibvumidza sub-rezinesi uye kuvaka kwesoftware yakagadzirwa neEPL uye isiri-EPL (nyangwe ine kodzero) kodhi yakapihwa marezenisi, chero iyo isiri-EPL kodhi iri "Akaparadzaniswa module [s] ye software".
Uye zvakare, iyo EPL inowedzera kumwe kuchengetedzwa kwevanopa kodhi yeEPL mune mhosva / mhosva dzinokonzereswa nechipo chekutengesa kusanganisira iro Basa.
Copyleft isina kusimba (yakasungirwa kune software "module")
Iwo maRisense anogona kugadzirisa basa.
Vatengesi vanogadzira software vanofanirwa kudzivirira kana kubhadhara vapi vekutanga EPL vanopa kubva kumatare edzimhosva / kukuvara kunokonzerwa nekutengesa kupihwa.
Zviripachena, iyo EPL ndiyo chaiyo rezinesi rezvirongwa zveEclipse Foundation. Kusanganisira yakakurumbira Eclipse IDE. Asi yakawana kumwe mukurumbira kupfuura ipapo - kunyanya munyika yeJava:
Clojure (Chirongwa chemutauro)
Graphviz (Girafu yekuona package)
Jetty (Yekushandisa server): mbiri rezinesi EPL1.0 / Apache License 2.0 kubva Jetty 7
JUnit (Java yunifomu yekuyedza fomu)
Mozilla Veruzhinji Rezinesi (MPL)
Iyo Mozilla Veruzhinji Rezinesi iri rezinesi rinoshandiswa kune software inogadzirwa neMozilla hwaro. Asi zvirokwazvo haina kuganhurirwa kunzvimbo iyoyo. Iyo MPL inovavarira kuve nhanho yekubvumirana pakati pemarezinesi akaomarara (seGPL) nemarezinesi anotendera (seMIT License).
MuMPL iyo "rezinesi yuniti" ndiyo faira rekunobva. Marezinesi havatenderwe kudzora kodzero dzevashandisi uye kuwana pane chero faira rakafukidzwa neMPL. Asi iyo imwecheteyo purojekiti inogona zvakare kuve neayo epamutemo asiri-MPL marezinesi mafaera. Iyo projekiti inoguma inogona kuburitswa pasi pechero rezinesi, chero mukana wekuwana maMPL marezinesi mafaera apihwa.
Copyleft isina kusimba (yakasungirwa kune yega mafaera)
Marezinesi anofanirwa kupa kwakakodzera basa.
Marezinesi anogona kugovera zvakare Basa Rekushandisa pasi pematemu akasiyana
Marezinesi haakwanise kunongedzera sosi yeMLL-ine marezinesi
Varezinesi vanofanirwa kugovera MPL-ine marezinesi kodhi kodhi pamwe neayo Anoburitsa Basa.
Mozilla Firefox (web browser), Mozilla Thunderbird (email mutengi): MPL
LibreOffice (hofisi suite): MPL2.0
H2 Dhatabhesi Injini (dhatabhesi): MPL2.0 uye Eclipse License 1.0
Cairo (2D graphic injini): MPL 1.1 kana LGPLv2.1
Neiyo ASL, isu tiri kupinda munzvimbo ye kubvumira marezinesi emahara. Asi kunyangwe iyo FSF inoratidza Apache License mune dzimwe nguva. Iyo Apache License inobvumidza sezvo isingade ani Rinobva basa rinofanira kugoverwa pasi pemitemo imwechete. Mune mamwe mazwi, iyi isiri-kopyleft rezinesi.
Iyo ASL ndiyo chete rezinesi rinoshandiswa kumabasa eApache Software Foundation. Ichionekwa senge ine hushamwari-bhizinesi, yakawana kugamuchirwa kwakapararira kunze kwesangano iri. Hazvisi zvisizvo kuona mabhizinesi-giredhi mapurojekiti achiburitswa pasi peASL.
Marezinesi anogona kugovera zvakare Basa Rekushandisa pasi pematemu akasiyana.
Marezinesi haafanire kugovera kodhi yekodhi pamwe chete neDerivative Basa ravo.
Android (inoshanda sisitimu): ASL 2.0 ine zvimwe zvisaririra (kunyanya nezve iyo Linux kernel)
Apache httpd (Webhu saiti): ASL 2.0
Apache spark (Cluster komputa masisitimu): ASL 2.0
Chitubu Chemukati (Chimiro cheJava-based Enterprise application): ASL 2.0
Iyi irisensi inozivikanwa kwazvo. Kunyangwe pamwe inonyanya kufarirwa. Nekuisa mashoma mashoma paungashandisazve, iyo MIT License inogona kuve nyore kusangana nemamwe marezinesi, kubva kuGPL kuenda kune ekuchengetedza marezinesi.
atomu (chinyorwa mupepeti): MIT License
SQLAlchemy (SQL toolkit uye Object Relational Mapper yePython): MIT License
BSD License inouya mune zvitatu zvinonaka. Iyo yekutanga 4-clause License, iyo "yakadzokororwa" 3-chirevo License uye iyo "yakareruka" 2-clause License. Zvese mumweya zviri padyo neMIT License. Uye zvirokwazvo, pane mashoma kwazvo musiyano uripo pakati peiyo 2 -chikamu BSD License & iyo MIT License.
3- uye 4-chirevo BSD License zvinowedzera zvimwe zvinodikanwa zvine chekuita nezvekushandisa zvakare zita uye kushambadzira. Ichi chinhu chekufunga kana iwe uchida kuchengetedza chako chigadzirwa kana zita rezita.
Varezinesi havagone kushandisa iro rekutanga zita reMunyori kana chiratidzo chekutenda kutsigira Basa Rinobva (3- uye 4- chidimbu BSD)
Marezinesi anofanirwa kubvuma iye wekutanga Munyori mune zvese zvekushambadzira zvinhu zvinotaura maficha kana kushandiswa kweBasa (4 -chikamu BSD)
Django (webhu ramework): 3 -shanduro BSD
Redis (dura re data): 3 -chikamu BSD
Ruby (programming mutauro): 2 -chikamu BSD uye tsika rezinesi
Nginx (Webhu server): 2 -shanduro BSD
NetBSD (Inoshanda system): 2 -shanduro BSD - 4 -chikamu BSD kusvika 2008
Izwi rekupedzisira pane Open Source marezinesi
Kana iwe ukauya izvo kure, makorokoto! Unozvinzwisisa izvozvi, kutyora iri hombe chaizvo uye musoro wakaoma. Asi zvakakodzera kutora nguva yekusarudza rezinesi rakakodzera rerojekiti yako - uye kuita sarudzo iyoyo kare. Inogona kukuserera matambudziko mazhinji gare gare, kuti ushandise nguva yako nesimba rako kushanda pane yako projekiti pane kubata nekopirisiti kana zvinoenderana zviri pamutemo.
Kunyangwe ndikaita zvese zvandinogona kuti musoro iwoyo usvike, hazvisi nyore nguva dzose kupfupisa hunyengeri hwemarezinesi akasiyana siyana. Uye kupfuura mashoma marezinesi makuru anoratidzwa pano, pane gumi nemaviri mamwe kana mashoma anowanzo shandiswa.
Saka, usazeza kushandisa chikamu chemashoko pazasi kuti utiudze zviri YAKO rezinesi rinodiwa uye nei. Kana kutaura zvimwe zvakakosha hunhu ini ndingave ndakanganwa!
Zvinonzwisisika Query Kugadziriswa muSQL Server
Maitiro Ekutamisa Windows 10 License Kuti Nyowani / Mumwe Computer
Dhaunirodha Hapana Kodzero Dzakasununguka Mifananidzo yeBlogs neIndaneti
7 Inotyisa Vhura Sosi Webhu Kuita Software YeLinux uye Unix-senge MaSystem
Tarisa Kana Wako Windows 10 Chirongwa Cheshupu Is Retail, OEM, Or Volume
10 Yemahara Project Management Software Sarudzo Kuti Uchengete Timu Yako On-Track
6 Github dzimwe nzira dzakasununguka uye dzinogadzirirwa
11 Vhura Kunobva Zvishandiso zveVanyori